Ny Torolàlana ho an'ny Semalta manontolo ho an'ny hosoka amin'ny Internet
Ny Internet dia loharano lehibe ho an'ny olona saika. Ny tranonkala E-varotra dia mandray soa avy amin'nyny tranonkala amin'ny fidirana amin'ny mpanjifa samihafa manerantany. Amin'ny ankabeazan'ny tranga, ny olona mampiasa ny teknolojia ara-barotra amin'ny aterineto, noho ny tranonkala maroprograma fanoroana, izay efa nisy tamin'ny fotoana - societe fiche de paie exemple. Na izany aza, ity loharanom-baovao ity dia misarika ny sain'ny mpamono maimaim-poana. Araka nyManao tranonkala maro ny olona, ​​ireo mpanao heloka bevava cyber dia manohy manavao ny fitaovana sy ny fomba fiasany, ary saika ny endri-pifandraisan'ny ordinateraraha misy karazana hacks iray na maro. Rehefa mamorona tranonkala izahay, dia mifantoka indrindra amin'ny famoahana vokatra avy amin'ny vokatra / serivisy ary ny fivarotana Internetfahaiza-manao mba hitazonana ilay toerana avo amin'ny laharana SERP. Vokatr'izany, ny mety hitranga sy ny loza mety hitranga amin'ny hack dia tsy mandinika velively amin'ny ezaka ataontsika ety anaty aterineto.Vokatr'izany, mihatra ny raharaha momba ny hosoka amin'ny aterineto.
Alexander Peresunko, ny Semalt Customer Success Manager, dia manasa anao hijery ny trangam-panafody tranainy indrindra:
Ity teknika ity dia tafiditra amin'ny famoronana tranonkala an-tserasera. Vokatr'izany,ny jiolahy cyber dia afaka mahazo tombony tsy voamarina mba hikirakira azy ireo ary manome ny mombamomba azy manokana amin'ny pejy sandoka. Ity hetsika ity ho valin'izanydia miteraka fahatakarana vaovao ho an'ny antoko fahatelo izay tsy mifantoka fotsiny amin'ny fampahafantarana ny fampahalalam-baovao fa mampiasa azy io koa mba handefa ny famindrana heloka bevava.Ny fahatsapana ny mpitsidika momba ny fanafihana mitaiza ny famonoan-tena dia zava-dehibe.
Email e-mail dia ireo mailaka tsy mitonona anarana, izay toa mitaky eolona iray hanao zavatra iray manokana..Ny ankamaroan'ny mailaka spam dia ahitana rohy mankany amin'ireo tranonkala mahatsiravina ary koa fangatahana antso ho amin'ny asa, izaymanome ny hacker feno amin'ny toe-javatra rehetra. Ny mailaka amin'ny spam dia afaka manatanteraka hetsika marobe amin'ny heloka bevava sy ireo heloka hafa teratany hafatoy ny hosoka.
Ny Hacker dia afaka mamorona tranonkala sandoka hanatanterahana ny sasany amin'izy ireoonline scams. Ireo tranonkala sandoka dia afaka mifidy mpividy ary manery azy ireo hividy amin'ny tranonkala diso. Vokatr'izany, mahazo vola ny volavery ao amin'ny kaonty fivarotana izay tsy mazava ny tompony. Ny tranonkala sandoka dia mety hahatonga ny mpanjifanao ho matoky ny fivarotanao, ka hahatonga ny manontolodingana mahomby.
Ny famadihana dia ny fidirana tsy ara-dalàna na ny fanomezan-dàlana amin'ny ordinatera na amin'ny aterinetoteknika. Ny hackers dia mahazo fivarotana an-tserasera atsy ho atsy ary maka vola an-tapitrisany. Amin'ny tranga hafa, ireo hackers dia afaka maka tombony ihany koafampahalalana avy amin'ireo mpampiasa an-tapitrisany. Ny famonoana dia manasazy ny lalàna ary mety hitarika amin'ny fonja. Ny fandavana ny tolotrasa dia fihetsika mahazatrafehin-kevitra izay miteraka famerenana server iray amin'ny fangatahana. Ireo sy hack maro hafa dia afaka manipika tranonkala iray izay manao ny ezaka SEO rehetramandehana.
Ho an'ny hetsika rehetra ao anaty aterineto hanohy tsara, dia tsy maintsy misy tranga toy ny hosoka amin'ny aterinetoary koa ny andrana hakana azy io. Vokatr'izany, samy manana ny antony manosika azy ny olona samihafa raha ny momba ny fampiasany aterineto. Fatompon'ny tranonkala, dia zava-dehibe ny mitadidy ireo tranganà hosoka amin'ny Internet, izay mety hanafika ny tranokalanao. Ankoatra izany, ny hackers dia afaka mifantoka ihany koa amin'ny anaompanjifa ary mangalatra fampahalalana sarobidy. Ohatra, ireo hackers dia afaka manangona kolikoly be dia be amin'ny alalan'ny phishing na spam.Afaka mianatra momba ny hosoka amin'ny aterineto ianao amin'ity torolàlana ity. Azonao atao ihany koa ny mitazona ny tranokalanao ho azo antoka sy azo antoka amin'ny fampiasana azy ireo.